बल्ल खुल्यो सनस*नीपूर्ण खुलासा : रबि पुरै निर्दोष, सा*लिकरामले गरेको यथार्थ पुरै भेटियो, अब रबि जे*लबाट छु*ट्ने पक्का – PanchKhal Online
Home/समाचार/बल्ल खुल्यो सनस*नीपूर्ण खुलासा : रबि पुरै निर्दोष, सा*लिकरामले गरेको यथार्थ पुरै भेटियो, अब रबि जे*लबाट छु*ट्ने पक्का
221 10 minutes read
काठमाडौँ — ओखलढुंगाको रावादुलु गाउँपालिकाकी ५५ वर्षीया नीलकुमारी कार्की महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा उप*चाररत छिन् । सुरुमा आएको हल्का ज्वरो बढेर शरीर ना*तागत बन्दै गएपछि साउन पहिलो साता उनी छोराछोरीको बोलावटमा काठमाडौं आइन् ।
साउन ११ गते वसुन्धराको ग्रिनसिटी अस्पताल भर्ना गरिएकी नीलकुमारीलाई २४ गते थप उपचारका निम्ति टिचिङ अस्पताल सारियो ।
चिकित्सकहरूले उनलाई निमोनियाँ बि*ग्रिएको बताएका छन् । आठ सन्तानमध्येका माइँला छोरा जगत झन्डै एक महिनायता उनको हेरचाहमा खटिएको खटियै छन् । अस्पताल भर्ना भएकै दिनदेखि नियमित कु*रुवा बस्दै आएकी अस्मिता भने पछिल्ला आठ दिनयता बिरामी आमा भेट्न अस्पतालसम्म जान पाएकी छैनन् । पाऊन् पनि कसरी ? ह*ठात् आइपरेको अनौ*ठो परि*स्थितिको बन्धनमा परेकी अस्मिता साउन ३० यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको थु*नुवा कक्षमा छिन् ।
साउन २० गते माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालि*कराम पुडा*सैनी चितवन नारायणगढस्थित कंगारु होटलमा झु*न्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि रुकु भनिने अस्मिताको नाम सतहमा आएको हो । शालि*करामको मोबाइलमा प्रहरीले फेला पारेको भिडियोमा उनले आफ्नो आ*त्मह*त्याको दोष यिनै २२ वर्षीया अस्मिता, न्युज २४ टेलिभिजनमा ‘जनतासँग सिधा कुरा’ कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने र सोही कार्यक्रमका पत्रकार युवराज कँडेललाई लगाएका छन् ।
यही भिडियो बयानका कारण प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को भाग २, परिच्छेद १२ को आ*त्मह*त्या क*सुरअन्तर्गत आ*त्मह*त्या दु*रुत्साहनअन्तर्गत तीनै जनालाई साउन ३० गते काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको थु*नामा राखेको छ ।
रवि प*क्राउ परेलगत्तै उनका समर्थकले भरतपुरलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रद*र्शन चर्काउँदै आएका छन् । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा समेत रवि प*क्राउ घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा समेत यही घटनाको चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ ।
चर्चाको यो कोलाहलमाझ छायामा परेकी अस्मिताबारे कान्तिपुरले गरेको खोजले उनी कसरी परिबन्दमा परेकी थिइन् भन्ने मात्रै देखाउँदैन, आ*त्मह*त्या गरेका पत्रकार शा*लिकरामले उनलाई कसरी निरन्तर मा*नसिक या*तना दिइरहेका थिए भन्ने पनि प्रस्ट पार्छ ।
कान्तिपुरले यो घटना केलाउन शा*लिकराम र अस्मिताबीच विभिन्न चरणमा फेसबुक म्यासेन्जर र एसएमएसमार्फत भएका कुराकानीसम्बन्धी तथ्य भेट्टाएको छ, जसले अस्मिता र शा*लिकरामको प्रेम प्रकरणमा रवि र पत्रकार युवराजको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको देखाउँछ ।
अस्मिताका दाइ जगतले शालि*करामले अस्मिता र आफ्नोसमेत नाम लिएर बोलेको भिडियो अनलाइनमार्फत सार्व*जनिक भएपछि मात्रै आफूले बहिनीको प्रेम सम्बन्ध र त्यसका उल्झनबारे जानकारी पाएको सुनाए । ‘म अस्पतालमा रहेका बेला एक जना बहिनीले यस्तो भिडियो आएको छ । तपाईं र अस्मितालाई पनि शा*लिकरामले पोलेको छ भनिन्,’ उनले भने, ‘राति घर गएर भिडियो हेरें ।’
जेठा दाइ साउदी अरबमा रहेको र अन्य भाइबहिनी सानै भएकाले जगतले बहिनी अस्मिता र कान्छा भाइको अभिभावकत्व गरिरहेका छन् । चाबहिलको एक फर्मास्युटिकलको व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत जगतले घटना सुनेपछि ओखलढुंगाको गाउँमा रहेका बुबा साह्रै सुर्ता*एको सुनाए । ‘बुबाले मलाई केकसो हो, कुरा थाहा छैन । के गर्नुपर्छ गरेर मिलाओ भन्नुभा’छ,’ उनले भने ।
जगतले केकसो भएको हो भन्नेबारे धेरै कुरा मेसो पाएका छैनन् । उनले आफ्नी बहिनीको सो*झोपनाको फाइदा शालि*करामले उठाएको र महिनौंसम्म प*रिबन्दमा पारेको भन्नेचाहिँ निष्कर्ष निकालेका छन् । घटनापछि कैयौं युट्युब च्यानलले उनलाई पछ्याइरहेका छन् । र बोल्न द*बाब दिइरहेका छन् ।
घटनाबारे अनेक तथ्य, भ्र*म र हुने, नहुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेकोबारे पनि जगतले धेरथोर थाहा पाएकै छन् । ‘यस्तो पनि हुन्छ भन्ने के कल्पना थियो र ?’ आमाकै उप*चारमा निरन्तर अस्पताल र डेरा गर्दागर्दै था*केका उनले सुनाए, ‘यता आमाको बिमारमा सुधार छैन । उता बहिनीको अवस्था त्यस्तो छ । कति त*नाव छ, कसरी भन्नु ?’ बहिनी र शालिकरामबीच गो*प्य एसएमएस कसले र किन सार्वजनिक गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे । ‘अनुसन्धान चल्दै गर्दा गोप*नीयताको ख्यालै नगर्ने काम भयो,’ उनले भने ।
अस्मिता थु*नामा परेको एक साता बितिसक्दा पनि आफूहरूले आमालाई केही थाहा नदिएको उनले जानकारी दिए । ‘आमालाई क*डा औ*षधि चढाइएको छ । बे*लाबे*ला मात्र ब्युँझेर कुरा गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि अस्मिता खै भन्नुहुन्छ । हामीले ड्युटीमा छे भनेर ढाँ*टेका छौं ।’
शालि*करामले अस्मितालाई प्रेमको नाममा महिनौंसम्म मान*सिक या*तना दिएको अस्मिता कार्यरत अस्पताल बीपी स्मृति अस्पतालकी सेयर सदस्यसमेत रहेकी स्टाफ नर्स जिता बरालले बताइन् । शालिकरामको आ*त्मह*त्यापछि अस्मिताले सम्बन्धबारे आफूलाई विस्तृतमा बताएको उनको भनाइ छ ।
भनिन्, ‘शा*लिकरामले अस्पतालका चिनेजानेका सबैलाई अस्मितालाई श्रीमतीकै रूपमा चिनाएको थियो । तर पछि पो थाहा भयो, उसले अनेक घु*र्की देखाएर अस्मितालाई मानसिक द*बाबमा राखेको रहेछ ।’ त्यसो त शा*लिकरामले अन्य केही पत्रकार साथीहरूलाई समेत अस्मिता आफ्नी श्रीमती रहेको बताएको देखिन्छ ।
शा*लिकरामले आफूले अस्मितालाई जागिर लगाइदिएको बताए पनि अस्पतालका अध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले अस्मिताले खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेको दाबी गरे । ‘अरू धेरै कुरा त मलाई थाहा भएन । तर शा*लिकरामले भनेर नाम निस्केको भने होइन,’ केसीले भने ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि अस्मिता निकै धेरै रो*एको र आफूहरूले कैयौं दिनसम्म सम्झाउनुपरेको जिताको भनाइ छ । अस्मिता नक्क*ली मायाको फन्दामा परेर मान*सिक या*तना खेप्न बाध्य भएको उनको दाबी छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि आफैंले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लसँग कुरा गरेर अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने कुरा गरेको उनले सुनाइन् । ‘अस्मितालाई चितवन लैजाने साँझ मात्रै हामीले रवि प*क्राउ परेको थाहा पायौं । अस्मिताले त चितवन पुगेपछि मात्रै हो रविलाई देखेको,’ जिताले भनिन् ।
गतवर्षको दसैंपछि काठमाडौंको रानीबारीमा बस्दै आएका दाइसँग बसी उनले नर्सिङको लाइसेन्स लिएकी हुन् । लाइसेन्स हात परेपछि जागिरको खोजीमा रहेकै बेला फे*सबुकमार्फत उनको चिनजान शालि*करामसँग भएको हो । गत वर्षको पुसबाट उनीहरूबीच सम्बन्ध सुरु भएको देखिन्छ । सम्बन्धका करिब आठ महिना अनेक उतारचढाव र घुम्तीहरूले भरिएको देखिन्छ ।
अस्मिताका निकट साथी र उनीहरूबीचको फेसबुक कुराकानी केलाउँदा शालि*करामले आफूलाई नर्स एकदमै मनपर्ने बताउँदै अस्मितासँग नजिकिन खोजेको देखिन्छ । शा*लिकरामले एकपछि अर्को झू*टको सहारा लिएर अस्मितालाई मायाजालमा पारेको उनीहरूको कुराकानीबाट पुष्टि हुन्छ ।
शा*लिकरामले आफ्नी पूर्वप्रेमिका पनि स्टाफ नर्स रहेको, उनी सडक दुर्घ*टनामा त्रिशूलीमा ख*सेर म*रेको र उसको अनुहार पनि तिम्रो जस्तै थियो भनेर भा*वनात्मक कुरा गर्दै अस्मितालाई मायामा फ*साएको देखिन्छ । अस्मितालाई बिहीबार र शुक्रबार थु*नुवा कक्षभित्रै भेटेर लामो कुराकानी गरेकी अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटलाई पनि अस्मिताले यही कथा सुनाएकी थिइन् ।
अस्मिता र शालि*करामबीचको कुराकानीले पनि यही तथ्यको झलक दिन्छ । केही साताको संवादपछि शा*लिकराम र अस्मिताबीच प्रेमसम्बन्ध सुरु भएको देखिन्छ । आफू अविवाहित रहेको र ख्यातिप्राप्त सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसँग काम गर्ने भन्दै उनले आफ्नो ओजपूर्ण व्यक्तित्वलाई आधार बनाएर अस्मितासँग सम्बन्ध गाँसेको देखिन्छ ।
पूर्वप्रेमिकाको मृ*त्यु भएको भन्ने शा*लिकरामको कुरामा अस्मिताले बारम्बार अविश्वास गरेको पनि देखिन्छ । अस्मिताले कस्ती थिइन् त खै पूर्वप्रेमिका, फोटो पठाऊ भनेर प्रश्न गरेपछि भने शा*लिकराम बारम्बार तर्कि*एको देखिन्छ । उनीहरूको कुराकानीबाट अस्मिताको प्रश्न शालि*करामले बारम्बार टार्दै आएको पुष्टि हुन्छ । आफूलाई सत्य सावित गर्न शालि*करामले एकपछि अर्को झू*टको सहारा लिएका छन् ।
अस्मिताले बारम्बार पूर्वप्रेमिकाको फोटो मागेपछि शालि*करामले आफ्नै आफन्त पर्ने एक युवतीको तस्बिर पठाएका थिए । अन्त्यमा अस्मिताले झू*ट पक्रिएपछि भने शा*लिकरामले आफूले प्रेम गर्नकै निम्ति त्यसो गरेको र माया नगरे जे पनि गर्न सक्ने भन्दै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहे ।
सम्बन्धको एकाध महिनापछि नै शा*लिकरामले अस्मितालाई बिहे गर्न द*बाब दिएको देखिन्छ । उनीहरूबीच फे*सबुक म्यासे*न्जरमा भएको कुराकानीमा शालिक*रामले कोर्ट म्यारिज गर्न अस्मितालाई बारम्बार द*बाब दिँदै अनेक घुर्की लगाएको पाइन्छ । चैत ७ मा शालिकरामले अस्मितालाई लेखेका छन्, ‘सुन त, कोट म्यारिज गर्नी ल भोलि वा पर्सि । हुन्छ कि नाइँ ?’ उनले यो म्यासेजमा आफूसँग रवि दाइ रि*साएको उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्ना दाइहरू पनि अविवाहित रहेको र आफू पनि खुट्टामा नउभिइसकेको भन्दै अस्मिताले तत्काल विवाह गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेकी थिइन् । शालि*करामले कोर्ट म्यारिज नै गर्न दबाब बढाइरहे पनि अस्मिता स*शंकित देखिन्छिन् । तर शा*लिकरामले निरन्तर उनीमाथि कोर्ट म्यारिज नगरे जे पनि हुने भन्दै दबाब दिइरहन्छन् । चैत ९ र १२ मा पनि शा*लिकरामले अस्मितालाई बिहे गर्न दबाब दिएका थिए । चैत १२ को म्यासेजमा लेखिएको छ, ‘आज पनि भन्छु, विवाह गरौं । जेजे हुन्छ सब म गर्छु ।’
जवाफमा अस्मिताले विवाह गर्न समय लाग्ने भन्ने आफ्नो अ*डान राखेकी छन् । प्रत्युत्तरमा शालिकरामले कोर्ट म्यारिज गर्ने द*बाब दिँदै त्यसका निम्ति फोटो र नागरिकता मागेको देखिन्छ ।
त्यसो त सम्बन्धमा आएका प्रत्येक उतारचढावमा शालि*करामले म*र्ने ध*म्की दिँदै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । पुस २८ मा पनि उनले अस्मितालाई लेखेका छन, ‘ओके, बाई । मेरो ला*स चाँडै देख्नेछ्यौ । अब त अ*ति भयो, स*हन सक्दिनँ ।’
शा*लिकराम सम्बन्ध जसरी पनि अघि बढाउने र त्यसका निम्ति जस्तोसुकै मूल्य पनि चु*काउन तयार देखिन्छन् । जब कि शं*कास्पद व्यवहार र झू*टहरूको जगमा बढेको सम्बन्धका कारण आजित अस्मिताले शा*लिकरामसँग सम्बन्धलाई अगाडि नबढाउन बारम्बार प्र*यत्न गरेको देखिन्छ । जस्तो कि माघ २ मा भएको कुराकानीमा पनि शालि*करामले बारम्बार भेट्न दबा*ब दिएका छन् । अस्मिताले आफू बिरामी भएकाले भेट्न नसक्ने बताइरहेकी छिन् । शा*लिकरामले मेरो माया चाहिँदैन भन्दै घु*र्की देखाउँदै आफूसँग जसरी भए पनि भेट्न अनुरोध गरिरहेको देखिन्छ ।
एक दिन शालि*करामले राति ९ः५५ मिनेटमा अस्मितालाई म्यासेज गरेर आफू घरअगाडि रहेको र जसरी पनि कि फोन उठाउन कि घरबाहिर आउन द*बाब दिएका थिए । उनले आफूलाई नभेटे वा फोन नउठाए सम्ब*न्धको कुरा दाइलाई भनिदिने भन्दै अस्मितालाई द*बाब दिएको देखिन्छ । उनले ८ बजेर ५५ देखि १० बजेर ९ मिनेटको बीचमा पठाएका चारवटा म्यासेज यस्ता छन्—
८ः५५– क*सम अब त अ*ति भयो। तिम्रो दाइलाई भन्छु ।
९ः५५– म क*सम दाइसँग कुरा गर्छु । अब जे हुन्छ हुन्छ, नत्र एक पटक फोन रिसिभ गर त ।
१०ः०९–क*सम गेट ढ*कढक गरेर नाम लिएर बोलाउन नपरोस् है ।
शालि*करामका निम्ति अस्मितालाई द*बाबमा राख्ने बलियो ह*तियार ‘म*र्ने घुर्की’ पनि देखिन्छ । माघ २९ मा शालिकरामले वि*षादीको सानो बट्टा हातमा लिएको फोटो अस्मितालाई फेसबुकमा पठाएका छन् र लेखेका छन्, ‘म पा*गल भएको छु । अब मेरो अन्तिम कुरा यही हो ।’ यो दिन शालि*करामले आफ्नो छट*पटी समेटिएका लामो व्यहोराका म्यासेज अस्मितालाई पठाएको देखिन्छ ।
माघबाट सुरु भएको अस्मिता र शालिकरामको सम्बन्धको छ*टपटी त्यसपछिका महिनामा उचारचढावमा बितेको देखिन्छ । फागुन २७ मा पनि शालिक*रामले अस्मितालाई भेटन बाध्य पार्न खोजेको देखिन्छ । उनले आफू अफिसअगाडि नै आएर जसरी पनि भेटिछाड्ने मनसाय राखेको प्रस्टिन्छ । शालि*करामले आफूलाई नभेटे रातको समयमा घरअघि आएर नामै लिएर बोलाउने भन्दै पनि ध*म्क्याएको देखिन्छ ।
सम्बन्धको झन्डै चारपाँच महिनासम्म पनि शा*लिकरामले आफू अविवाहित रहेको तथ्य लुकाइरहेका थिए । एक दिन कुरैकुरामा शालिकरामको मुखबाट अनयासै सम्झनाको नाम सुनेपछि अस्मिता झ*संग भएकी थिइन् । सुरुमा त उनले शालि*करामकी अर्की प्रेमिका रहेको र उनको नाम सम्झना रहेको निष्कर्षमा पुगेकी थिइन् ।
जब कि अस्मिताको यो शं*कालाई शा*लिकरामले घरी घु*र्की र घरी रु*वाइले टार्दैछ*ल्दै आएका थिए । शा*लिकरामका शंका*स्पद बन्दै गएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा उतारचढाव आएको देखिन्छ । एक दिन अस्मिताले शालिकरामको फे*सबुकको ब्ल*क लिस्टमा सम्झना घिमिरेको नाम देखेपछि कथाले नयाँ मोड लिन्छ ।
अस्मिताले सम्झनासँग फेसबुकमार्फत कुरा थाल्छिन् । र सम्झनालाई उनका श्रीमान्को विवाहेतर सम्बन्धबारे बताउँछिन् । सँगै आफूलाई झू*ट बोलेर कसरी शालिकरामले झु*क्याए भन्नेबारे पनि खुलाउँछिन् । श्रीमती र प्रेमिका दुवैले आफ्ना झू*ट थाहा पाएपछि शालि*कराम मा*नसिक रूपमा विक्षि*प्त बनेको देखिन्छ । र, अन्तिम समयसम्म पनि आफू विवाहित रहेको कुरा झू*ट भएको बताउँदै अस्मितालाई घु*र्की लगाइरहेको पाइन्छ ।
अस्मिताले शा*लिकराम विवाहित रहेको हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न अनेक स्रोत र सम्पर्क कुराकानी गरेको देखिन्छ । उनले सम्झना शालिकरामकी साँच्चै श्रीमती हुन् वा होइनन् भन्ने पुष्टि गर्न सम्झनालाई शालिकरामसँगका फोटो पठाउन भनेको देखिन्छ ।
यसबाट बुझिन्छ, शालि*करामले विवाहित रहेको कुरा निरन्तर इन्का*र गरेपछि अस्मिता त्यसलाई प्रमाणित गर्न लागिपरेकी थिइन् । फेसबुक म्यासेन्जरमा सम्झनाले अस्मितालाई लेखेकी छिन्, ‘उसले मलाई मे*रो बाटोमा कहि*ल्यै नआउनू भनेको छ । मैले फोटो पठाउँदा मलाई नै अ*सर पर्छ । होस् नानु, मसँग नरि*साउनू ल । सरी पछि कुनै दिन पठाउँछु नि । अहिले चाहिँ सरी ल ।’ सम्झनाको यो म्यासेजबाट विवाहेतर सम्बन्ध श्रीमतीले था*हा पाएपछि शालिकरामले श्रीमतीलाई समेत मा*नसिक रूपमा ध*म्की दिएका थिए ।
अस्मिताले शा*लिकराम विवाहित रहेको पुष्टि गर्न सम्झनालाई निकै सम्झाएर विश्वासमा लिएको देखिन्छ । कान्तिपुरले विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त गरेका कागजात केलाउँदा प्रस्टिन्छ, साउन ८ गतेतिर सम्झनाले शालिक*रामसँग अँगा*लो मारेको तस्बिर अस्मितालाई प*ठाएकी थिइन् । अस्मिताले आफू विवाहित रहेको पुष्टि गरेपछि र विवाहेतर सम्बन्धबारे श्रीमती जानकार रहेपछि शालि*कराम मा*नसिक रूपमा विक्षि*प्त बनेको देखिन्छ । सम्बन्धको उतारचढावका बेला पनि उनले अस्मितालाई बिहे गर्न दबाब दिइरहेकै थिए ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा शा*लिकराम पत्नी सम्झनाले घटनाको अघिल्लो दिन पनि अस्मितासँग आफ्नो फोनमा कुराकानी भएको बताइन् । आफ्ना पतिको विवाहेतर सम्बन्धबारे घटनाको केही दिनअघि मात्रै आफूले थाहा पाएको र अस्मितासँग फेसबुक म्यासेन्जरमा कुराकानी भएको स्विकारिन् ।
शालि*कराम र अस्मिताबीचको फेसबुक म्यासेन्जर र सम्झनासँगको कुराकानीबाट अनेक झू*टको सहारामा शालि*करामले खडा गरेको विवाहेतर प्रेम बिथोलिएपछि उनी मान*सिक रूपमा वि*क्षिप्त बनेर चितवन गएको देखिन्छ ।
शालिक*रामले चितवन पुगेपछि पनि अस्मितालाई फेसबुकमा म्यासेज छाडेको देखिन्छ । अन्तिम म्यासेजमा उनले लेखेका छन, ‘अति भयो अब । म*र्नुभन्दा अरु उपाय छैन । खुसीसँग बाँच्नू, रमाउनुहोस् हाँसीखुसी ।’ त्यसो त उनले चितवन जानुभन्दा केही दिनअघि आफू बि*रामी रहेको र अस्पताल गएर जँचाई औ*षधि खाइरहेको भन्दै अस्पतालको जाँच पुर्जाको फोटो पठाएको देखिन्छ ।
त्यसो त अस्मिताले जि*द्दीवाल शालिक*रामबाट मु*क्ति पाउन अनेक व्यक्तिसँग परामर्श र सल्लाहको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । कान्तिपुरले गरेको अध्ययनले उनले बहराइनमा रहेका रवि लामिछाने निकट एक व्यक्ति र न्युज २४ मा कार्यरत केहीसँग शलि*करामले कसरी आफूलाई अविवाहित रहेको भनेर झु*क्याएर प्रेम गरे र कसरी बिहे गर्न द*बाब दिँदै मा*नसिक रूपमा विच*लित बनाए भनेर बताएको पाइन्छ ।
अस्मितालाई भेटेकी अधिवक्ता फूलमायाले उनी महिनौंदेखि शालि*करामको मान*सिक र यौ*निक हिं*सामा परेको बताइन् । उनले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भनिन्, ‘शालिक जीवितै रहेको भए ऊमाथि महिला हिं*सा गरेको पुष्टि हुने कैयौं आधार छन् ।’ अस्मिता महिनौंसम्म मान*सिक हिं*सा र द*बाबमा बाँच्न बा*ध्य भएको उनको भनाइ छ ।
शालि*करामले भने बारम्बार आफू रविसँग काम गरेको भन्दै आफ्नो ओज देखाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । उनले माघ २९ मा रविसँग आफूले गरेको म्यासेजको स्क्रिनसट भन्दै अस्मितालाई एउटा फोटो पठाएको देखिन्छ । उक्त स्क्रिनसटमा शालिक*रामले लेखेका छन्, ‘दाइ मलाई माफ गर्नुहोला । तपाईंहरूले अफिसमा मलाई सधैं जि*स्क्याउने मान्छेले मलाई धो*का दिएकी छ दाइ ।’
कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त स्क्रिनसट धमि*लो देखिन्छ । त्यसमा उनले आफूहरूको सम्बन्धबारे ‘सिधा कुरा जनतासँग’ टिम जानकार रहेको सं*केत गरेका छन् । आफूलाई खो*ज्न प्र*यास नगर्न भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘धेरै कुरा सोचेर मन बुझाउन स*किनँ दाइ ।’
शा*लिकराम विवाहित रहेको थाहा पाएपछि पनि शालि*करामले बारम्बार मान*सिक त*नाव दिन थालेपछि अस्मिताले सम्बन्धबाट छुटकारा मिलाइदिन रविले प्रयास गरिदिए हुने भन्ने म*नसाय राखेको देखिन्छ । अस्मिताले न्युज२४ मा कार्यरत केही पत्रकारलाई भेटेरै शालि*करामबारे कुरा राखेको र समस्या समाधान निम्ति पहल गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।
त्यही पहलका दौरान अस्मिताले शालि*करामसँगको च्या*टको स्क्रिन सट न्युज२४ का पत्रकार अनिल ढुंगेललाई दिएको अस्मिता निकट साथीहरूले बताए । शालि*करामको आ*त्मह*त्यामा रवि मु*छिएपछि केहीले सोही कुराकानीको स्क्रिन सट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै रवि निर्दोष रहेको स्टाटस लेखेका थिए ।
कान्तिपुरले गरेको टेलिफोन कुराकानीमा भने अनिलले यसबारे खुलेर कुरा गरेनन् । ‘थाहा भएन । म यस विषयमा बोल्न चाहन्नँ । मैले अदालतमा बोल्ने हो,’ उनले भने । अस्मिताले तपाईंलाई शालिक*रामसँग भएको कुराकानीको केही प्रमाण दिएकी थिइन् भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई केही थाहा छैन । मलाई फोन नगर्नुस् ।’
शालिकरामले आ*त्मह*त्या गरेको २ दिनपछि न्युज२४ बाट अस्मितालाई फोन गएको देखिन्छ । अस्मिता कार्यरत बीपी स्मृति अस्पतालकी सेयर सदस्यसमेत रहेकी स्टाफ नर्स जिता बरालले न्युज२४ बाट बारम्बार अस्मितालाई अन्तर्वार्ताका निम्ति फोन आएको तर आफूहरूले मिडियामार्फत सार्वजनिक हुँदा अस्मितालाई सार्वजनिक रूपमा अ*प्ठ्यारो आउन सक्ने भएकाले प्रस्ताव अ*स्वीकार गरेको बताइन् ।
आमाको उपचारका निम्ति अस्मिता ग्रिनसिटी अस्पतालमा रहेका बेला न्युज२४ कै पत्रकार बताउने केहीले आफूहरू अस्पताल बाहिर रहेको र थोरै भए पनि कुरा राखिदिन भन्दै बा*रम्बार आ*ग्रह गरेका थिए ।
शालि*करामको आ*त्मह*त्यापछि किन न्युज२४ ले बारम्बार अस्मिताको अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गर्‍यो ? के त्यसमा रविको कुनै भूमिका थियो ? यसबारे भने केही तथ्य खुलेको छैन ।
उपरोक्त खबर हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं | या सबै कुरा केलाएर हेर्दा रबि लामिछाने निर्दोष भएको साबित हुन्छ | कान्तिपुर दैनिकले सबै कुराको प्रमाणलाई केलाएर प्रकासित गरेको छ तर यति हुँदा हुँदै पनि रबि लामिछाने प*क्राउ बारेमा भने प्रहरी प्रशासनमा केहि झमेला हो भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ | यसै बिषयलाई केलाएर हेर्दा पनि रबि निर्दो*ष छन् | अहिले पनि उनको पक्षमा जनसागर उर्लेको छ |
देशका विभिन्न ठाउमा आ*न्दोलन र प्र*दर्शन भएको छ | रबि औ देश बचाउ जस्ता ना*रा र जु*लुश कायम रहेको छ |उनका समर्थकले बाटो बाटोमा रविको फोटो सहितको प्र*दर्शन गरिरहेका छन् |बरिस्ठ कलाकार देखि बरिष्ठ अधिबक्ता सम्मले रविको समर्थन गरिरहेका छन् |
रवि लामिछानेका दाई भन्छन् ‘सत्यको जित नभए पनि आखिरमा सत्य म र्दैन’
बैंकले गर्यो रवि लामिछानेको घर लिलामी
रवि लामिछानेले प्रहरीलाई दिएको बयान जस्ताको तस्तै